कतै तपाइलाई पनि निन्द्रामा हुने समस्याका कारण हृदयघात सम्म पुर्‍याउने त हैन ? विराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. पुरु कोइरालाकाे यस्तो सुझाव - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०७, २०७६ समय: १५:१५:४८
बिराटनगर / मानिसलाई निन्द्रा अर्थात् सुतिरहेको बेला समेत विभिन्न समस्या हुन्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ । तर निन्द्रामा पनि हामीलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले दुख दिइरहेको हुन्छ । त्यस मध्य श्वासप्रश्वास एउटा मुख्य समस्या हो । निन्द्रामा हुने श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्याले स्वास्थ्यमा पार्ने असर, यस रोगका लक्षण, यसबाट बच्ने उपाय लगाएतका बिषयमा पूर्वेली न्यूजले विराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा पुरु कोइराला सग गरेकाे कुराकानी :
निन्द्रा सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूमा शरीरमा जाँगर नहुने, निन्द्रा नपुगेको जस्तो हुने, शरीर थकित हुने हुन्छ । त्यसै गरी कुनै पनि बेला मानिस भुसुक्क निदाउन सक्दछ । निन्द्रामा घुर्ने व्याक्तिलाइ यो समस्या हुने सम्भावना बढी रहन्छ । सामान्य अवस्थामा मोटो पन बढ्दै गएको छ भने पनि समस्या हुन सक्छ । समयमा यसको उपचार गर्न नसकेमा घातक अवस्था समेत ल्याउन सक्छ । मानिस कुनै पनि बेला निदाउन सक्ने भएकाले दुर्घटना हुन सक्छ । विभिन्न तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा ड्राइभर निदाएर ठुला ठुला दुर्घटना भएको पाइन्छ । त्यसै गरी थाइराइड प्रेसर र सुगरका बिरामीहरूलाई समेत समस्या बढ्दै जाने र निको नहुने हुन्छ । समस्या जटिल हुँदै गएमा मुटुको चाल बिग्रिने साथै कुनै पनि समय हृदयघात हुन सक्छ ।
यस्तो रोग लागेको शङ्का लागेमा चिकित्सकको सल्लाह लिनु नै उपयुक्त मानिन्छ । अस्पतालमा सुत्ने गरी गएर यसको परीक्षण गर्नु पर्दछ । शरीरमा स्लिप मेसिन लगाएर सुते पछि यसको समस्या छ कि छैन भनेर सजिलै पत्ता लाग्दछ । यस लगायत विभिन्न विकसित प्रविधिकाे प्रयोग गरेर समेत परीक्षण गर्न सकिनेछ । यस समस्याको समाधान गर्न सकियो भने अन्य रोगबाट समेत बच्न सहज हुने गर्दछ । यी लगायतका विभिन्न जानकारी प्राप्त गर्न विराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा पुरु कोइराला सँग गरिएको यो भिडियो कुराकानी पुरै हाेर्नुहाेस् ।
बिराट मेडिकल कलेज
खानेपानी मन्त्रीले ‘श्री ५ को सरकारको तर्फबाट’ भन्दै गरेको सम्बोधन गरेकाे भिडियाे बन्याे भाइरल (भिडियो सहित )
विषम परिस्थितिमा सुरक्षा र सहयोगमा अहोरात्र खटिने योद्धाहरुमा नमन (भिडियो)